Cancala Dhangii - Fuula - Fuula fili
Hanga iddoo duwwaa bitaa xiyyoo fuula fi barruu gallmee gidduutti dhiistu galchi. Yoo teessuma fuula Fuldoyyaa'e fayyadamte, hanga iddoo duuwwaa mudana barruu keessaa fi galmee barruu keessaa gidduutti dhiistu galchi.
Iddoo duuwwaa qarqara mirga fuulaa fi barruu galmee gidduutti dhiistu galchi. Yoo teessuma fuula Fuldoyya'e fayyadamte, hanga iddoo duuwwaa mudana barruu alaa fi mudana alaa kan fuulaa gidduutti dhiistu galchi.
Haalata keewwataa kan haalata fuulaa filatame irratti barruu tarreessuf akka wabiitti itti fayyadamuu barbaaddu fili.Hojjaan bocquu kan haalata wabii keessatti iftaa'e addaan fageenya muraa fuulaa qindeessa.
Man'eewwan fuula maxxanfaman irraatif dirqaalalee hiriraa ifteessi.
Man'eewwan surdaalaan fuula maxxanfame irratti handhuuressa.
Man'eewwan sarjaan fuula maxxanfame irratti handhuuressa.
Haalata teessuma fuulaa galmee ammee keessatti fayyadamuu f fili.
Dhangeessuu tarii yoo fuulawwan hanquu, fuulawwan guutuu, ykn fuulawwan hanquu fi guutuu kan haala fuula ammeetti fayyadamte ifteessi.
Bitaa fi Mirga
Akkaataan fuula ammee fuulota qaraa fi guutuu lamaan mudanaalee bitaa fi mirgaa waliin akkaataa ifteessamaniin agarsiisa.
Fuulota maxxanfaman akka kitaabatti yoo hidhuu barbaadde teessuma kana fayyadami. Teessuma kana yoo akka kitaaba fuulota maxxansamanii muudanatti gargaarami.Iddoo hidhuu akka muudana "keessaa"tti galchi.
Akkaataan fuula ammee fuulota qaraa (right) qofaa agarsiisa. Fuulotni guutuun akka fuulota qullaatti agarsiisamu.
Akkaataan fuula ammee fuulota guutuu (left) qofaa agarsiisa. Fuulotni qaraan akka fuulota qullaatti agarsiisamu..
Wanta dhngii fuulatti OfiinTaasisaa
Wantootni fakkaasaa akka dhangii warqaa filte waliin wal simaniif hagamtaa lammataa jijjiira. Tarreefamni fakkaasa wantoota ta'eera.
Galmeessa dhugaa Barreeessuu